indlela yokwenza ukudla kwezilwane zasendlini ngomshini wokudlainsitha wenja yensimbi
Ngokwanda okuqhubekayo kwezinhlobo zezilwane ezifuywayo,Izilwane ezifuywayo ezahlukahlukene zinezidingo ezihlukile zokudla kwezilwane ezifuywayo. Abathandi bezilwane abaningi abathandayo abanuka iphunga lokudla ngaphambi kokukhetha ukudla kwezilwane ezifuywayo .Igama elejwayelekile elejwayelekile lomkhuba wesintu lokukhipha ukudla kwezilwane ezifuywayo., akulungile ukusebenzisa okuthandwa nguwe ngekhala kwezilwane ezifuywayo. Siyazi ukuthi iphunga izinja lingaphezu 40 izikhathi kunomqondo womuntu wokuhogela, futhi bangakhiqiza iphunga elibaluleke kunazo zonke izinhlobo zamakha. Abantu bancamela iphunga lephunga noma ukunambitheka okumkhulukazi. Kepha izinja zehlukile. Izinja zithanda ukunambitheka kwenyama nephunga lama-oysters.
Manje ziningi izinhlobo zokukhiqizwa kokudla kwenja ezikhiqizwayo kuma-perferefere womuntu ,bazokwenza ukudla kwenja futhi bafake ukunambitheka kobisi noma okunye ukunambitheka.kodwa akulungile. Ngakho-ke, Ubuhle bezinja buthinteka kakhulu, futhi inja idla okuncane.
Kususelwa kule mfuno yemakethe, Umshini wokuwina we-pellet usungule izinhlobo ezahlukahlukene zomshini wokudla inja. Ngokwe-demoan yokukhiqiza ehlukile, umshini we-extruder futhi unezilungiselelo ezahlukahlukene zokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Umshini wokudla wenja ungalungiswa ngamapharamitha wenqubo anjengokushisa nomswakama ukwenza umkhiqizo uhluke ngesimo, oyingqayizivele ngokunambitheka, ukondleka okucebile nokubuthakathaka kokuthungwa. Ilungele izilwane ezahlukahlukene ezifuywayo’ ukunambitha. Umshini wokudla izinja usetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni ukudla kwezinja, amakati, inhlanzi, ama-shrimps, izimpungushe nazo zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo , Kungumqondo ofanele wabakhiqizi abahlukahlukene.
Ukudla kwenja okukhiqizwa ngumshini wokudla wezinja kunezimpawu ezilandelayo:
1.Thuthukisa ukulunga kokudla kwezilwane zasekhaya
2. Shintsha noma uthuthukise inani lomsoco lokudla kwezilwane ezifuywayo
3. Thuthukisa izilwane ezifuywayo’ ukugaya kanye nezinga lokufakwa kokudla
4. Shintsha ukwakheka nokwakheka kokudla kwezilwane zasekhaya ukwenza kube lula ekudleni kwezilwane ezifuywayo
5. Shintsha okuqukethwe kwezinkomba zokudla ezahlukahlukene zokudla kwezilwane ezifuywayo, njenge: yehlisa umswakama ukuze wandise impilo yeshalofu yokudla, okuwusizo ekugcinweni
6. Shintsha ubukhulu bokudla, hlikihla ukubumbana nokukhafula ukukhulisa usizi lokudla okuningi
7. Bulala amagciwane ahlukahlukene, i-salmonella nezinye izinto eziyingozi, ngcono ukuphepha kokudla kwezilwane kanye nenhlanzeko